Ny voalohany eto an-tany! Fandroana fandroana azo antoka sy mahasoa, amin'izay dia afaka "mandro" ianao amin'ny fantsom-pianaranao manokana
Home / Blog / Ny voalohany eto an-tany! Fandroana fandroana azo antoka sy mahasoa, noho izany dia afaka "mandro" amin'ny haingam-pandehanao ianao
Ny voalohany eto an-tany! Fandroana fandroana azo antoka sy mahasoa, noho izany dia afaka "mandro" amin'ny haingam-pandehanao ianao
2021 / 04 / 22 FisokajianaBlog 4311 0
Lohatenin'ny fandroana vaovao amin'ny fandroana vaovao
"Mandro sy mandoro ditin-kazo manitra, mitendry piano ary mankafy ny chrysanthemum", dia nivoatra tsikelikely ny fandroana ho fombafomba manan-danja, maneho ny fitiavantsika sy ny fitiavantsika ny fiainana. Ny fandroana, toy ny fahafinaretana milamina sy mampahazo aina indrindra amin'ny androntsika, dia tsy afaka manala ny havizanan'ny andro ihany, fa afaka mitondra traikefa amin'ny fandroana toe-tsaina hafa, izay hanokatra andro vaovao, fa eto koa mba hanao veloma ireo sahirana andro
Natao tamim-pitandremana, karakarao izaho sy ianao, mba hanomezana anao fifaliana tsara indrindra amin'ny fandroana
Araka ny tatitra dia 20,000 XNUMX mahery ny maty vokatry ny lozam-pifamoivoizana an-trano any Frantsa isan-taona, anisan'izany ny fahafatesan'olona maro vokatry ny fianjerana tao amin'ny fandroana fandroana, nararan'ny rano mafana na maty an-drano. Olona manodidina ny 4,000 no maty isan-taona noho ny fianjeran'ireo fandroana, izay mihoatra ny isan'ny olona maty tany Frantsa noho ny lozam-pifamoivoizana nandritra ny taona iray (3,259 tamin'ny 2018).
Ireo lozam-pifamoivoizana ireo, dia mahatonga antsika hitandrina tsara amin'ny fahitana koveta fandroana mety aminy na ny be antitra, ny kilemaina, ny marary, ny vehivavy bevohoka, ny zaza tsy ampy taona, ny olona malemy tongotra sy ny olon-kafa, indrindra ireo mpampiasa seza misy kodiarana namboarina manokana ho azy ireo, fantatrao ve raha misy izany? Avelao aho hampahafantatra anao ny fanomezana manokana ho an'ny fandroana mafana sy mahafinaritra - "kovetabe fandroana".
Ity koveta fandroana ity no voalohany manerantany “Kovetabe fandroana” noforonin'i Andriamatoa Li Wei, manam-pahaizana momba ny fikarohana ambony sy mpamorona amin'ny sehatry ny fahadiovana, izay mikarakara bebe kokoa ny traikefa fandroana an'ny mpampiasa. Ity kovetabe fandroana sit-in ity dia natao manokana ho an'ireo be antitra, kilemaina, marary, vehivavy bevohoka, zaza tsy ampy taona, olona malemy tongotra, indrindra ireo mpampiasa seza misy kodiarana.
Famolavolana mahaolona, ​​mahatsapa aina sy toerana fandroana mahazo aina
Fantatsika rehetra fa mando mandritra ny fotoana maharitra ny trano fandroana ary malama ny tany, indrindra rehefa miditra sy mivoaka avy ao amin'ilay kovetabe fandroana malama sy malama isika, dia tena mora ny misolelaka sy milatsaka. Ny olona salama dia mila mitandrina ao anaty fandroana, fa tsy azo ihodivirana koa matetika.
Ny hevi-dehibe amin'ity koveta fandroana ity dia teboka 2: voalohany, ny endrika tsotra an'ity kovetabe fandroana sit-in ity dia mamela ny endriny hipoitra avy amin'ny fahatsorana. Ny tsotra dia mitovy amin'ny mety, azonao atao ny mifanitsy amin'ny toerana malalaka rehetra, amin'izay afaka "mandro" amin'ny hafainganao ianao.
Faharoa, ny fiasan'ny koveta fandroana dia tsotra, azo antoka ary haingana. Rehefa mampiasa, faran'ny iray amin'ny tehin'ny fibatana fandroana mifandraika amin'ny seza fametrahana, ary mihantona ao anaty tanky. Rehefa atsangana ny sezantsika, ny takelaka misy ny fipetrahana ary ny sisin'ny fandroana amin'ny haavony mitovy dia afaka misosika mora foana any amin'ny seza isika ary mampiakatra ny tongotra ao anaty tanky. Rehefa ampidinintsika hatrany ambanin'ny tanky ny seza dia afaka mandro sy misitrika ary manotra ara-dalàna isika.
Rehefa vita ny fandroana dia afaka atsanganantsika ny seza hatramin'ny sisin'ny fandroana fandroana amin'ny lovia misy ny seza, azontsika atao ny mihodina sy manangana ny tongotra hivoaka ny tanky, vita ny fandroana.
Rehefa mitovy ny haavon'ny faran'ny fandroana ny haavon'ny seza fiakarana, dia mety amintsika ny mipetraka sy mivoaka ny koveta fandroana, mipetraka eo amin'ny seza isika aorian'ny fampidinana ny seza ao anaty tanky. Fandroana, fampidirana fandroana, mifanaraka amin'ny zavatra ilainao isan-karazany. Ny fiasan'ny fiakarana dia fehezin'ny bokotra fanaraha-maso eo amoron'ny tanky, sady tsotra no mety, nefa koa manana endrika tsy mihetsika manohitra ny fahalavoana. Ny fikarakarana ny fandroana anao no safidy voalohany amin'ny koveta fandroinay.
Ny lafiny fandroana amin'ny rindrina, azonao atao ny manampy efijery fandroana vera, afaka miova ho efitrano fandroana ho an'ireo be antitra na kilemaina ianao. Miaraka amin'ny fiasan'ny anti-slip sy anti-fall, azo antoka sy mora kokoa amintsika ny hipetraka sy hivoaka ny fandroana. Mandritra izany fotoana izany dia azo ampiasaina ho toy ny tongotra an-tongotra ihany koa izy, mipetraka sy mivoaka, mametraka rano hanorana ny tongotra sy tongotra.
Ny fiakarana sy ny fianjeran'ny seza fiakarana dia fehezin'ny tontonana fanaraha-maso tafiditra ao an-tampon'ny tanky, izay mety hitovy amin'ireo takelaka fanaraha-maso hafa an'ny fandroana. Ho fanampin'izany, ny kovetabe fandroana sit-in dia afaka manana toerana miatrika havia sy havanana arakaraka ny fivoaran'ny fandroana.
Previous :: Sarobidy loatra loatra koa ireo trano fandroana ireo, efa hitanao ve izy rehetra? Next: Ny haingo amin'ny efitrano fandroana an'ireo 16 "Andininy antsipirihany", manao ny mety, dia mahavonjy antsasaky ny raharaha